किन आउँदैछन् चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ?
काठमाडौं– चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौंमा अवतरण गर्दै छन् । उनी पाकिस्तानमा अफगानिस्तान–पाकिस्तान–चीन विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी भइसकेपछि त्यहाँबाट नेपाल आउन लागेका हुन् ।
वाङको यो भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
किनकि यही भ्रमणले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे तय गर्ने अनुमान छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ केही समयपछि भारतको भ्रमणमा आएको मौका पारेर नेपाल पनि आउनसक्ने अनुमान भएका छन् । उनी नौ घन्टाका लागि मात्र नेपाल आउने भनिएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बताएको छैन । त्यसो त चिनियाँ पक्षले पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङबीच सोमबार द्विपक्षीय समझदारीका विषयमा वार्ता हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँको भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको विषयमा पनि चर्चा चाहिँ हुनसक्छ तर मुख्य अजेन्डा यो होइन,’ उनले फरक धारसँग भने, ‘बरु पछिल्लो समय चिनियाँ सहयोगको विषयमा छलफल हुने र समीक्षा हुने कार्यक्रम चाहिँ छ ।’
अन्य १८ सदस्यसँग नेपाल आउने वाङको यो भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ चाहिँ हेरिएको छ ।
के साँच्चिकै नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् सी ?
पछिल्ला केही दिन यता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउन सक्ने समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसका लागि नेपाल र चीनका कुटनीतिज्ञहरु पनि जुटेका छन् । त्यसैले सी नेपाल भ्रमणमा आउने विषयमाथि चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति : भदौ २१, २०७६ शनिबार २२:२९:५३,